PSG oo Kylian Mbappe ka dhigeysa laacibka 2aad ee ugu qaalisan kubadda cagta. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / PSG oo Kylian Mbappe ka dhigeysa laacibka 2aad ee ugu qaalisan kubadda cagta.
PSG oo Kylian Mbappe ka dhigeysa laacibka 2aad ee ugu qaalisan kubadda cagta.
Muqdisho – Weeraryahanka kooxda AS Monaco, Kylian Mbappe ayaa ku dhow inuu u dhaqaaqo kooxda lacagaha faraha badan faraqeysa ee Paris Saint-Germain; £183 milyan oo lacagta Ingiriiska ah ayuuna ugu wareegi karaa, sida ay wararku sheegayaa.
Faransiiskan heerka caalami ayaa sanadkii dhamaaday soo jiitay indhaha macalimiinta wuxuuna u ahaa sanadkii uu sumcaddiisa kubadda ka gaday dunida isaga oo dhaliyay 26 gool ilaa Stade Louis II.
Kooxda Real Madrid ayuu xiddigan u haa dooqa koobaad horraanti suuqa, laakiin markii ay ka gaabisay, kooxda PSG ayaa la fahansan yahay in ay hana-qaadkan u dooneyso si dhab ah.
Mundo Deportivo oo kasoo baxda Catalan ayaa sheegaya in heshiiska xiddigan uu dhamaad ku dhow yahay, isla markaana Parisians ay isku diyaarineyso in ay bixiso £165 milyan iyada oo sidaas oo kale bixin doonta lacag kale oo dheeraad ah isla markaana ku xiran qaab ciyaareedka laacibka.
Haddii uu heshiiskan sidan u dhaco Mbappe waxa uu noqon doonaa ciyaaryahanka labaad ee ugu qaalisan kubadda cagta, isla kooxda PSG ayaa horraanti xagaagan Neymar ku soo xera-galisay £198 milyan oo u dhiganta €222 oo lacagta Yurub ah.
Mbappe kooxda reer France ee Monaco sanadkii hore waxa uu kula guuleystay horyaalka Leag 1, halka uu sidaas oo kale la gaaray afar dhamaadka koobka horyaallada Yurub.
Previous: Juventus oo ku soo biirtay loolanka loogu jiro Virgil van Dijk.
Next: Maqal:- Casharka Tafsiirka Qur’aanka Idaacadda Himilo “Darsiga 71aad”